लेखक टम मोरिस पुनः जवाफ: यदि हैरी पॉटर जनरल इलेक्ट्रिक चलायो Martech Zone
म विश्वास गर्दिन कि एक दिन लाग्छ कि म केवल हाम्रो दुनिया मा इन्टरनेट, गुगल, र सामाजिक नेटवर्क को प्रभाव मा चकित छैन। त्यो वास्तवमै 'geeky' लाग्न सक्छ तर म आज घर पुगे र मेरो पोस्ट को बारे मा एक धेरै दयालु प्रतिक्रिया थियो टम मोरिस ' पुस्तक, यदि ह्यारी पॉटर सामान्य इलेक्ट्रिक चलायो। त्यो भर्खर मेरो दिन बनायो! पूरा पोष्ट र टमका टिप्पणीहरू हुन् यहाँ.
टमले मलाई आफ्नो पुस्तकमा बेचेको छ, केवल राम्रो समय दिएर नमस्ते भन्न र आफ्नो पुस्तकमा केही पृष्ठभूमि दिन पर्याप्त समय दिएर। आज हामी यसलाई कत्ति पटक देख्छौं? मैले कहिले पनि टमको वालेटमा एउटा पैसा राखेको छैन, तर जब उनले मेरो पोष्ट नेट मार्फत देखेका थिए भने, उनी नमस्कार भन्न पर्याप्त थिए। मेरो पोष्टमा प्रतिक्रिया दिनको लागि आफ्नो तालिकाबाट समय निकाल्दै गर्दा मलाई बताउँछ कि म टोमको पुस्तकमा पढ्ने जानकारी कमसेकम भन्नको लागि पूरा हुनेछ।
विडम्बनाको कुरा, मैले भर्खरै भर्जिन स्टोरबाट घर पाएको थिएँ जहाँ मैले केही महिना अघि मेरो फोन किनेको थियो। म minutes 55 मिनेट को लागी लाइनमा उभिएँ (हो, यो सत्य हो), डेस्कमा उठें, र मलाई तुरून्तै मेरो टुटेको फोनको सम्बन्धमा कल गर्न पर्ने फोन नम्बरको साथ एक व्यवसाय कार्ड दिइयो। मैले ती केटाहरूसँग धेरै पैसा खर्च गरें, र तिनीहरू मलाई देखेर खुशी पनि भएनन्!
साईड नोट ... मैले टम लेखें र ठट्टामा उनलाई भने कि म हैरी पॉटरको प्रशंसक होइन, तर उसले मलाई आश्वासन दिन्छ कि म चिन्ता गर्दिन। उसले लेख्यो:
पुस्तक यस्तो तरीकाले लेखिएको हो कि हैरी पॉटरको सम्बन्धमा अनुमानित ज्ञान वा मान्यता नबुझ्न। मैले सीईओहरूको समूहबाट सुनेको छु जसले कहिल्यै कुमालेको शब्द पढेका छैनन् र जसले पुस्तकको प्रशंसा गर्दै लेखेका छन्!
तपाईको अनुग्रही ईमेलको लागि धन्यबाद! म आशा गर्दछु कि तपाईले नयाँ पुस्तक रिफ्रेसि novel्ग उपन्यास पाउनुभयो र तपाईको आफ्नै थप प्रतिबिम्बका लागि उत्तेजक! कसैले मलाई भनेका छन् कि झुठो अध्याय पुस्तकको मूल्यमा एक्लै थियो।
धन्यबाद, टम! तपाईं इन्डियानापोलिसमा आउँदा मलाई अवश्य अवश्य हेर्नुहोस्। कफी ममा छ!
टैग: ह्यारी कुम्हारटम मोरिस
विकिलीटी, सत्य, र शुद्धता
Digg प्रभाव: निष्कर्ष ... के यसले मद्दत गर्दछ?